မိသားစုလိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့သင်ျ Xxx ညစ်ညမ်းဂိမ္း
မိသားစုလိင်ဂိမ်းများတည်ထောင်ခဲ့၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅ ကိုရောက်စေဖို့ဂိမ်းထွက်ရှိသူများအရည်အသွေးကောင်းသင်ျအရေးယူပျော်မွေ့ရန်နိုင်စွမ်းကိုအတိအကျကြောင်း။ စ၊တဦးတည်းနှင့်သာအာရုံစိုက်၏ဤအရပ်ဌာနအပေါ်ခဲ့ပြီအဆက်ကိုယ္တိုင္အပူဂိမ်းကစားခြင်းချမ်းသာအခြေပတ်ပတ်လည်မိသားစုများလုပ်နေညစ်ညမ်းသော။ နေတယ်ဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်အပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းအပေါ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုမယ်သိရန်ကျေနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်သာကြာမိနစ်တစ်ဦးအမှု၊ပြီးတာနဲ့အတွင်းပိုင်း၊သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်အသေးစိတ်အစဉ်အနောက်တဖန်အ။, အများကြီးရှိပါတယ်နေရာထွက်သွားဖို့ဆိုရင်မေတ္တာသင်ျဗီဒီယိုများ၊သို့သော်အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်အခါသင်ချင်ရှုပ်များချွတ်ရန်အရာတစ်ခုခုကိုအလှန်? ကောင်းစွာ၊သင်နှစ်သက်ရှိခြင်း၏စိတ်ကူးတစ်ခုဆိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်၊ဒီအဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးနေရာခံရဖို့သင်တို့အဘို့! မိသားစုလိင်ဂိမ်းများဘို့အကဒီမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာအဝုိင်းနှင့်အဖြစ်မသွားမယ့်တစ်ဦးအလွန်ပူပြင်းတဲ့အတွေ့အကြုံအမှန်ပင်နားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါအများ၏သက်သက်ငွေပမာဏကြိုးစားအားထုတ်မှုသို့သွားပြီဟုသင်ပေးခြင်းတို့သည်အဂုဏ်သတ္တိများ။, ဒါကြောင့်၊အနည်းငယ်ယူကြည့်ပတ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်နှင့်သက်သေအထက်မြက်သောမိသားစုလိင်ဂိမ်းများ:ဘယ်တော့မှပြန်လိမ့်မည်ရုန်းကန်ရှာဖွေဖို့တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသောဝိဘတ်ကျော်သင်ျအရေးယူ!
ဖျားနာပြီးမောပန်း၏အလာရောက်လည်ပတ်သောအရပ်တို့ကိုမတွေအများကြီးရှိပစ္စည်း? ဒါကပြဿနာတစ်ခုအများကြီးနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကားဂိမ္းပေါက်ထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊နှင့်နေစဉ်သင်ရှိသည်ကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သူတို့ပဲရတဲ့အတက်နှင့်အပြေး၊နှစ်ပေါင်းများစွာကဤစီမံကိန်းခဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်နည်းလမ်းအကြောင်းသင်အမြဲကောင်းတစ်ဦးကျွန်းစုဂိမ်းများကစားရန်။ အခုအချိန်မှာ၊မိသားစုလိင်ဂိမ်းများသည်အစာ၏၄၄ ခေါင်းစဉ်–တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်၊မှန်သော? ပိုင့်အဘယ်သို့၊သူတို့အားလုံးအတွက်ထုတ်လုပ်-အိမ္၊ဆိုလိုတာကဒီမှာအသင်းကအသူသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသီးသန့်ထိန်းချုပ်ရေးအရာအားလုံးကိုကျော်ကြောင်းဖြစ်ပျက်။, ဒီပုံလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းညမ်းအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားနှင့်အတူအသီးအသီး၏အဂိမ်းများရှိသည်ရေရှည်တည်တံ့သောအကြား ၅ သို့ ၁၀ နာရီ၌၎င်း၊သင်သွားဘယ်တော့မှမဖွင့်ဖို့လိုခံစားရလွန်းပါတယ်ဝေးနေဖြင့်အချို့သောကောင်းသောအရည်အသွေးစုတ်လျှင်သင်သိသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်သင့်။ ရှိပါတယ်ဤမျှလောက်အမျိုးမျိုးမှကြွလာသောအခါအဆိုပါထုတ္ျကျနော်တို့လွန်း–ဒီတာပေါ့သည်ဟုဆိုလိုသည်နိုင်စေဖို့ဆွဲတက်အတိအကျအမျိုးအစားမီဒီယာစေလိုကြောင်း၊မေးခွန်းမပါဘဲ! အသံတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်၊မှန်သော? ကောင်းစွာ၊ဖွင့်ကြောင့်မိသားစုလိင်ဂိမ်းများတည်ဆောက်ခဲ့အတူတက်မြေပြင်ကနေသင်၏ဂုဏ်အလိုဆန္ဒ။
အရေးလုပ်ဖို့လုံးဝရှင်းလင်းဖို့ဂိမ်းကစားမှာတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်သူတို့အထဲမှာတွေ့လိမ့်မည်အခြေကျင်မိသားစုထြင္ခဲ။ သင်သက်သေတစ်ဖွဲ့လုံးစည်းသင်ျ၏အသစ်နှင့်အပူအဖြစ်မင်းကြီးပစ္စည်းပစ္စယ။ ကျနော်တို့အတွက်အထူးပြုဆောင်အများဆုံးနခ်စ္သူျလှုပ်ရှားမှုများသင်ပုံဖော်ကြည့်နိုင်တယ်၊အပါအဝင်တွေလိုပဲခံမြည်းကိုစုတ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အစ်မ၊အစာစားသင့်ရဲ့အမေရဲ့မြည်းနှင့်ပို့အပူဝန်ပည္ဆိုင္ရာသင့်ရဲ့သမီး၏မြေသြဇာလာျ။, မရှိခဲ့ဖူးပိုကောင်းတဲ့လေ့လာစူးစမ်းဖို့အချိန်အပြည့်အဝအကွာအဝေးနခ်စ္သူျသဘောတရားများနှင့်အာဘော်မှာမိသားစုလိင်ဂိမ်းများ:မှာကြည့်ခရီးစဉ်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတွက်ကိုယ်သွားမယ့်ဘာကိုအပေါ်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နားထောင်မှတဆင့်အခြားဘက်ခြမ်းမှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ရှိပါတယ်အလွန်အနည်းငယ်သောနေရာများတွင်အင်တာနက်အကြောင်းဆောင်ခဲ့နိုင်သင်သည်ဤအဆင့်၏မိသားစုထြင္ခဲ။ သင့်ရဲ့ကြက်အဆင်သင့်ခံစားဖို့အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းကိုပတ်ပတ်လည်? ရန်ကြာမြင့်သောအရာကိုပယ်တွင်လူရှုပ်ဖို့အပူဆုံးအစ်မနှင့်မိခင်ပေးခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါး?, ရဲ့တဦးတည်းကအရမ်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းထွက်ရှာဖို့:ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်နှင့်အပြည့်အဝကြည့်ရှုပျော်မွေ့ရရှိရန်သင်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။ ဘာမှမရှိဘူးရဲ့တံခွန်ထက်နိုင်အားပေးမည်ဟုသင့်ကြက်အတိုင်းမိသားစုအဖွဲ့ဝင်လိုသူ။ ငရဲ၊သင်ပင်အပျော်အပါးတစ်ဝမ်းကွဲ၊အန်တီသို့မဟုတ်အဖွားသင်ချင်တယ်ဆိုရင်–ရွေးချယ်မှုအားလုံးရင်းသင့်ရတစ်ချိန်ကနှင့်သင်အရောနှောအတွက်မှာမိသားစုလိင်ဂိမ်းများ။
ပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုရသည်အတွင်း၊ငါအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းမိသားစုလိင်ဂိမ်းများရောင်းချရန်ကိုယ်တိုင်ကအ punters သူမှတဆင့်လာကြလိမ့်မည်။ အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဤမျှကာလပတ်လုံးနှင့်အပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနား၊အမွတ္ဟန်ဆောင်နိုင်ပါ၊သင်တစ်ဦးချက်ချင်းလက်ငင်းအနကိုကယ်နှုတ်ဖို့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အပူဆုံးစုဆောင်းခြင်းကြီးမြတ်သင်ျ။ ဒါကြောင့်၊မိသားစုလိင်ဂိမ်းများအားပေးမည်ဟုကဒီမှာသင်သည်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်၊အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအပေါ်သင်၏လက်ကိုရယူခြင်းကြာနောက်မှာအားလုံးအချိန်မအဘယ်ပါတက်ကိုင်?, အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်အောင်နိုင်နဲ့လာရ၏တစ်ဦးအချပ်ကိုပျော်စရာမှာမိသားစုလိင်ဂိမ်းများ:သင့်ရဲ့ကြက်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်သင်အကြာတွင်!